इनरव्हिल क्लव अफ रुपन्देहीको अध्यक्षमा उमा अर्याल चयन
बुटवल, जेठ ३० । महिलाहरुमात्र आवद्ध इनरव्हिल क्लव अफ रुपन्देहीको वर्ष २०२०/२०२१ का लागि समाजसेवी ब्यक्तित्व उमा अर्याल ढकाल सर्वसम्मत रुपले चयन हुनुभएको छ । देशको विषम परिस्थितिका कारण लक डाउनको अवस्थामा अनलाइन मार्फत गरिएको बैठकबाट सर्वसम्मत रुपमा १३ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरिएको छ । बर्ष २०२०/२०२१ का लागि आईपिपी मन्जु आचार्य, उपाध्यक...
बुटवल, जेठ २३ । केही दिन अगाडी रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका वडा नं.–११ र रूकुम पश्चिमको चौरजहारीमा जातीय विभेदका कारण घटेका छुट्टाछुट्टै घटनाप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बुटवल उपमहानगर कमिटीले गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेकपा बुटवल उपमहानगर कमिटीका अध्यक्ष बाबुराम पन्थीको हस्ताक्षरबाट जारी गरिएको विज्ञप्ति मार्फत दुवै घटनाप्रति विभत्स...
बुटवल, जेठ २३ । केही दिन अगाडी रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका वडा नं.–११ र रूकुम पश्चिमको चौरजहारीमा घटेका छुट्टाछुट्टै घटनाप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) रुपन्देहीले गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेकपा रुपन्देहीका अध्यक्ष शिवराज सुवेदी र सचिव नारायणबहादुर जि.सी. (निर्मल) को संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी गरिएको विज्ञप्ति मार्फत दुवै घटनाप्रति विभ...
बुटवल, जेठ २३ । विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा प्रदेश पाँचका उद्योग पर्यटन वन तथा बाताबरण मन्त्री लिला गिरीले मन्त्रालय परिसरमा वृक्षारोपण गर्नुभएको छ । शुक्रबार मन्त्रालय परिसर भित्र आँप, लिचि, कटहर लगाएतका फलफुलका बिरुवा रोपिएको हो । वृक्षारोपण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गिरीले प्रदेश सरकारले वन जंगल र खाली रहेको ठाउँको संरक्षण गर्दै वृक्षारोप...
जेठ २२, 2077 बुटवल पोस्ट
बुटवल, जेठ २२ । प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले कोरोना नियन्त्रण र उपचारको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । ५ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बैठकमा प्रशासन, सुरक्षा निकाय र जनप्रतिनिधिबीच नियमित समन्वय गरी कामलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च पार्ने गरी स...
बुटवल, जेठ २० । प्रदेश नं. ५ मा मंगलबार १११ जना थपिएसंगै प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या ७ सय ६१ पुगेको छ । मंगलबार प्युठानमा पनि पहिलो पटक एकजना संक्रमित भेटिएका छन् । अब रोल्पा वाहेक ११ जिल्लामा कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् । मंगलबार कपिलवस्तुका ४९, रुपन्देहीका २३, बाँकेका १७, दाङका १७, बर्दियाका ३ जना र नवलपरासी पश्चिमका एकजनामा कोरोना...
बुटवल, जेठ २० । प्रदेश ५ सरकारले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद वैठकले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ राहत स्वरुप दिने निर्णय गरेको हो । बैठकले कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरुको शब बोक्नका लागि दुई वटा शबवाहन खरिद गर्न दुईवटा अस्पताललाई १५–१५...
काठमाडौं / नेपालमा थप २८८ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । सोमबार २८८ जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कूल कोरोना संक्रमतिको संख्या २०९९ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले सो जानकारी दिएका हुन् । योसँगै नेपालमा कोरोना निको भएर घर फर्किएको संख्या २६६ पुगेको छ । यस्तै हालसम्म कोरोनाबाट ८ जनाको मृत्यु...
बुटवल, जेठ २० । महामारीका रुपमा विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड–१९ को जोखिमका कारण यतिखेर विश्वका २१२ भन्दा बढी मुलुक प्रभावित छन । रोगबाट मुलुकलाई जोगाउन सरकारले अत्यावश्यक बाहेक बाहिर ननिस्किन जारी गरेको आदेश ‘लकडाउन’ को कारण मानिसको आवाजावत ठप्प छ । यस्तो अवस्थामा लकडाउनलाई कतिपयले भरपुर सदुपयोग पनि गरिरहेका छन् । भर्खरै कालोपत्र गरिएको र लेयर थपिए...
हिजो आज केही मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा सरकार विरुद्ध विभिन्न प्रकारका भ्रमित समाचार र गतिविधिहरु प्रकाशित हुँदै आएका छन् । त्यसैका आधारमा सामाजिक सञ्जालहरुमा त्यस्ता गतिविधिहरु भाइरल गराइएका छन् । यस प्रकारका गतिविधिले सरकारले गरेका राम्रा कामहरुलाई ओझेलमा पार्ने र नकरात्मक टिका टिप्पणी गरेर आम जनसमुदायमा भ्रम सिर्जना गरी सरकारप्रति अविश्वासको व...